Joshua 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
VaIsraeri vanorwira vaGibhiyoni (1-7)
Jehovha anorwira vaIsraeri (8-15)
Chimvuramabwe chinorova vavengi vari kutiza (11)
Zuva rinoramba rakamira (12-14)
Madzimambo mashanu anourayiwa (16-28)
Maguta ekumaodzanyemba anotorwa (29-43)
10 Adhoni-zedheki mambo weJerusarema paakangonzwa kuti Joshua akanga atora guta reAi akariparadza, kuti akanga aitira Ai namambo waro+ sezvaakanga aitira Jeriko namambo waro,+ uye kuti vagari vemuGibhiyoni vakanga vaita rugare nevaIsraeri+ vakaramba vari pakati pavo, 2 akatya kwazvo,+ nekuti Gibhiyoni rakanga riri guta guru, kungofanana nemamwe maguta akakura aitongwa nemadzimambo. Rakanga rakakura kupfuura Ai,+ uye varume varo vese vaiva varwi vakashinga. 3 Saka Adhoni-zedheki mambo weJerusarema akatumira shoko kuna Hohamu mambo weHebroni,+ Piramu mambo weJamuti, Jafiya mambo weRakishi, uye kuna Dhebhiri mambo weEgroni,+ achiti: 4 “Uyai mundibatsire; ngatirwisei guta reGibhiyoni, nekuti raita rugare naJoshua nevaIsraeri.”+ 5 Madzimambo mashanu evaAmori,+ anoti mambo weJerusarema, mambo weHebroni, mambo weJamuti, mambo weRakishi, namambo weEgroni, akabva aungana nemauto awo, uye akaenda akanodzika musasa pakatarisana neGibhiyoni kuti arirwise. 6 Varume vemuGibhiyoni vakabva vatumira shoko kuna Joshua kumusasa kuGirigari,+ vachiti: “Musaregerera varanda venyu.+ Kurumidzai kuuya! Tibatsirei mutinunure! Madzimambo ese evaAmori emunyika ine makomo aungana kuti atirwise.” 7 Saka Joshua akabva kuGirigari akaenda nevarume vese vehondo nevarwi vakashinga.+ 8 Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Usavatya,+ nekuti ndavaisa mumaoko ako.+ Hapana kana mumwe chete wavo achamirisana newe.”+ 9 Joshua akavarwisa vakavarairwa pashure pekunge afamba usiku hwese kubva kuGirigari. 10 Jehovha akavavhiringidza pamberi pevaIsraeri,+ uye vaIsraeri vakauraya vanhu vakawanda kwazvo kuGibhiyoni, vakavatevera nenzira yekumukwidza weBheti-horoni, vachivauraya kusvikira kuAzeka nekuMakedha. 11 Pavakanga vachitiza vaIsraeri uye vava pamateru eBheti-horoni, Jehovha akanayisa pavari chimvuramabwe chikuru chichibva kudenga, chikanaya kusvikira kuAzeka, chikavauraya. Vaya vakafa nechimvuramabwe vakanga vakatowanda kupfuura vakaurayiwa nebakatwa nevaIsraeri. 12 Pazuva iroro rakakundwa vaAmori naJehovha pamberi pevaIsraeri, Joshua ndipo paakataura naJehovha ari pamberi pevaIsraeri achiti: “Zuva, mira+ paGibhiyoni,+Uye mwedzi, paBani reAijaroni!” 13 Saka zuva rakaramba rakamira, uye mwedzi hauna kufamba kusvikira rudzi rwacho rwatsiva vavengi varwo. Hazvina kunyorwa mubhuku raJashari+ here? Zuva rakaramba rakamira pakati pedenga, rikanonoka kunyura kwenguva ingaita zuva rese. 14 Zuva iri risati rasvika hakuna kumbova nerimwe rakafanana naro uye hapana kuzombova nerimwe rakadaro rakateererwa inzwi remunhu naJehovha,+ nekuti Jehovha akanga achirwira vaIsraeri.+ 15 Joshua nevaIsraeri vese vakazodzokera kumusasa kuGirigari.+ 16 Munguva iyi, madzimambo mashanu aya akatiza, akahwanda mubako kuMakedha.+ 17 Joshua akabva audzwa kuti: “Madzimambo aya mashanu awanikwa akahwanda mubako kuMakedha.”+ 18 Saka Joshua akati: “Kungurutsirai matombo makuru pamuromo webako racho muise varume ipapo kuti vavarinde. 19 Asi vamwe vese musamira. Dzingirirai vavengi venyu, muchivauraya.+ Musavarega vachipinda mumaguta avo, nekuti Jehovha Mwari wenyu avaisa mumaoko enyu.” 20 Pashure pekunge Joshua nevaIsraeri vauraya vanhu vakawanda chaizvo zvekuda kuvapedza vese, kunze kwevamwe vakatiza vachipinda mumaguta akakomberedzwa nemasvingo, 21 vanhu vese vakadzokera kwaiva naJoshua kumusasa kuMakedha pasina akuvara. Hapana kana murume akamboti bufu* kuvaIsraeri. 22 Joshua akabva ati: “Vhurai muromo webako, mubudise madzimambo acho mashanu mubako muuye nawo kwandiri.” 23 Saka vakabudisa madzimambo acho mashanu mubako vakaenda nawo kwaaiva. Madzimambo acho ndeaya: mambo weJerusarema, mambo weHebroni, mambo weJamuti, mambo weRakishi, uye mambo weEgroni.+ 24 Pavakauya nemadzimambo acho kuna Joshua, akashevedza varume vese veIsraeri akati kuvatungamiriri vevarume vehondo vaakanga aenda navo: “Uyai kuno. Tsikai mitsipa yemadzimambo aya nechekugotsi.” Saka vakauya vakatsika mitsipa yawo.+ 25 Joshua akabva ati kwavari: “Musatya kana kuvhunduka.+ Shingai, musimbe, nekuti izvi ndizvo zvichaitwa naJehovha kuvavengi venyu vese vamuri kurwa navo.”+ 26 Joshua akabva avauraya, akavaturika pamatanda mashanu,* uye vakaramba vakarembera pamatanda acho kusvikira manheru. 27 Zuva rava kunyura, Joshua akarayira kuti vavaburutse pamatanda+ acho, uye kuti vavakande mubako ravakanga vambohwanda. Vakabva vaisa matombo makuru pamuromo webako racho uye achiripo nanhasi. 28 Joshua akatora Makedha+ zuva iroro, akaiparadza nebakatwa. Akaparadza mambo wayo uye munhu wese aiva mairi,* hapana waakasiya ari mupenyu.+ Akaitira mambo weMakedha+ sezvaakanga aitira mambo weJeriko. 29 Joshua nevaIsraeri vese vakabva kuMakedha vakaenda kuRibna,+ vakairwisa. 30 Jehovha akaisawo Ribna namambo wayo+ mumaoko evaIsraeri, vakaiparadza nebakatwa pamwe chete nemunhu wese aiva mairi,* hapana kana mumwe chete akapona. Saka vakaitira mambo wayo sezvavakanga vaitira mambo weJeriko.+ 31 Achibva kuRibna, Joshua nevaIsraeri vese vakaenda kuRakishi+ vakadzika musasa ikoko, vakairwisa. 32 Jehovha akaisa Rakishi mumaoko evaIsraeri, uye vakaitora pazuva rechipiri. Vakaiparadza nebakatwa pamwe chete nemunhu wese aiva mairi,*+ sezvavakanga vaita Ribna. 33 Horamu mambo weGezeri+ akabva aenda kunobatsira Rakishi, asi Joshua akamuuraya uye akaurayawo vanhu vake zvekuti hapana kana akapona. 34 Joshua nevaIsraeri vese vakabva kuRakishi vakaenda kuEgroni,+ vakadzika musasa ikoko, vakairwisa. 35 Vakaitora zuva iroro, vakaiparadza nebakatwa. Vakaparadza munhu wese aiva mairi* zuva iroro, sezvavakanga vaita Rakishi.+ 36 Joshua nevaIsraeri vese vakabva kuEgroni vakaenda kuHebroni,+ vakairwisa. 37 Vakaitora, vakaiparadza nebakatwa, vakaparadzawo mambo wayo, maguta ayo, uye munhu wese aiva mairi,* hapana kana akapona. Akaiparadza pamwe nemunhu wese aiva mairi,* sezvaakanga aita Egroni. 38 Joshua nevaIsraeri vese vakazonanga kuDhebhiri,+ vakairwisa. 39 Akaitora iyo namambo wayo nemaguta ayo ese, akazviparadza nebakatwa, akaparadza munhu wese aiva mairi*+ uye hapana kana akapona.+ Akaitira Dhebhiri namambo wayo sezvaakanga aitira Hebroni neRibna namambo wayo. 40 Joshua akakunda nyika yese ine makomo, Negebhu, Shefera,+ nenzvimbo dzine materu, nemadzimambo adzo ese, hapana kana akapona; akaparadza chinhu chese chipenyu,+ sezvakanga zvarayirwa naJehovha Mwari waIsraeri.+ 41 Joshua akavakunda kubvira kuKadheshi-bhaneya+ kusvikira kuGaza+ nenyika yese yeGosheni+ kusvikira kuGibhiyoni.+ 42 Joshua akakunda madzimambo aya ese nenyika dzawo panguva imwe chete, nekuti Jehovha Mwari waIsraeri ndiye akanga achirwira vaIsraeri.+ 43 Joshua akabva adzokera nevaIsraeri vese vaaiva navo kumusasa kuGirigari.+
^ ChiHeb., “akarodza rurimi rwake.”
^ Kana kuti “pamiti mishanu.”
^ Kana kuti “nemweya yese yaiva mairi.”